U Gaar Ah Dumarka: 5 Arin Oo Uu Kaa Doonayo Gacaliyahaagu Kulanka Sariirta
HomeAqoonta SariirtaU Gaar Ah Dumarka: 5 Arin Oo Uu Kaa Doonayo Gacaliyahaagu Kulanka Sariirta
caashaqa Aqoonta Sariirta, Wararka Maanta 0
Kulanka sariirta ayaa ah mid ay Raggu si weyn u sugaan habeenka Guurka waxana jirta waxyaabo badan oo ay ka fishaan Gacalisadooda.
Waxa laga yaabaa qaar badan oo ka mid ah Dumarku in ay dareemaan xishood badan ama la yaabaan waxa uu gacaliyeheedu samaynayo iskuna dayaan in ay muujiyaan in ayna doonayn.
Kulanka sariirta ayaa ah waajib ay isku leeyihiin lamaanaha is qaba waxana fiican in ay waajibkaas ka soo baxaan labada dhinacba.
Hadaba Maanta waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa 5 Arin oo uu Ninku ka doonayo Gacalisadiisa kulanka sariirta.
1.Haku Mashquulin Qoyskaaga iyo Asxaabtaada in badan:
Marku uu Aroosku dhamaado waxa laga yaabaa in ay gabdhaha qaarkood ku mashquulaan qoyskeeda ama Saaxiibadeed oo ay Telefoonka kala hadlaan marka ay kali isku noqdaan gacaliyeheeda arintaas ayaana ah mid dhibaysa Gacaliyahaaga maadama uu doonayo in aad isaga muhiimada sii so wakhtigaas.
Waxa laga yaabaa in aad baqayso taas oo keenaysa in aad isku daydo in aad isku dhaafiso la hadalka saaxiibadaa iyo qoyskaaga.
2.Xidho Dhar Soo Jiidasho Leh:
Waxa muhiim ah in aad habeenkaas u doorato dhar soo jiidasho leh laakiin ha xidhan dhar gabi ahaan jidhkaaga dibada keenaya sababta oo ah Culimada xidhiidha Sariirta ayaa sheegay in aad gabi ahaan dibada isku soo dhigto ma soo jiidanayso gacaliyahaaga laakiin dooro dhar qurux badan oo soo saaraya quruxdaada jidh ahaaneed.
3.In Aad Muhiimada Siiso Faah-Faahinta:
Kaliya diirada ha saarin in aad xidhato dhar qurux badan, habeenkan Ragga ayaa daneeya faah-faahino kale sida in aad marsato cadar udug badan, jilicsanaanta jidhkaaga iyo iyo ciddiyaha waxa aad sidoo kale xidhan kartaa Qoor dahab ah iyo waliba Kabo cidhib leh.
4.Isku Day in Aanad Noqon Qof Xidh-Xidha:
Xishoodka ayaa ah Arin iska dabiica oo ay Fahmaan Raggu laakiin hadii aad muujiso in aan aad u furantahay gacaliyahaaga waxa uu dareemayaa in aad u doonayso sida uu kuu doonayo waxana aad arintaas ku muujin kartaa luuqada indhaha, Shumis iyo kalmado jacayl ah.
Gacaliyahaaga ayaa bilaabi doona xidhiidhka idin dhexmari doona isaga oo kugu bilaabi doona taabasho kuna baashaalin doona sidoo kale waa in aad samayso sidoo kale waxana ay arintaas idinka caawin doontaa in kulankiina sariirta ka dhigto mid xiiso leh waliba waxa ay meesha ka saari doontaa cabsida dhexdiina ku jirta iyo waliba xishoodka.
Waa Maxay Jacaylka Aragtida 1-aad, Maxaase Lagu Gartaa?
Ragga Mise Dumarka? Ayaa Horay Uga Soo Kabsada Dhaawacyada Jacaylka?.